Shiinaha Model No: CBJ Taxanaha Haydarooliga haraaga baal jabiyaha warshad mashiinka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Midow Sare
Model No: CBJ Taxanaha Haydarooliga qashinka baal jabiyaha
Shaqaynta: Mashiinkaan isdabajooga ah ee mashiinka iskudhafka ah ee loo yaqaan 'CBJ Series' ayaa si khaas ah loogu talagalay in lagu jebiyo jajabyada laga soo saaro gawaarida qashinka ama birta duugga ah.
Shuruudaha looga baahan yahay isugeynta bale: xajmiga baaldiga duugga ah ≤2000mm×800mm×800mm (L × W × H), cufnaan ≤2.5 tan / m³.
Taxane CBJ mashiinka xoqida ee baaladaha jajabka ah wuxuu ku habboon yahay shirkadaha soo kabashada birta, dhirta birta ah, dhalaalida iyo shirkadaha wax lagu shubo si loo hagaajiyo tayada birta duugga ah iyo wax soo saarka birta si loo helo wax soo saar tayo sare leh oo tayo sare leh oo ah qalab xirfadeed,
Mashiinka CBJ mashiinka jajabka ah ee baalayaasha jajabka ah ee loo yaqaan 'CBJ' waxaa sidoo kale loo yaqaan mashiinka jajabka xannibaadda, waa jiil cusub oo xirfadlayaal kala furfuraya biraha qashinka ah, nooc ka mid ah qalabka baaritaanka. Mashiinka CBJ mashiinka xoqida ee baaladaha jajabka ah wuxuu ogaan karaa wasakhda ku jirta xirmada xirmada isticmaalaha, si loo hubiyo waxa ku jira birta duugga ah, si loo hubiyo tayada alaabada birta ah, si loo ilaaliyo xasiloonida suuqa birta duugga ah, CBJ taxanaha mashiinka xoqida ee baalasha kala goynta. waxaa si weyn loogu isticmaalaa birta, dhalaalida, birta, wharf iyo warshadaha kale.
●Mashiinka CBJ mashiinka xoqida ee baaladaha jajabka ah wuxuu leeyahay qeexitaano iyo moodooyin kala duwan, kuwaas oo dabooli kara baahida macaamiisha kala duwan.
Of Mashiino kala duwan ayaa lagu dari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Mashiinka isdabajoogga ah ee mashiinka baaldiyeyaasha baaldiyeyaasha ah ee 'CBJ' uma baahna in la hagaajiyo oo la rakibo
Operation Hawlgal fudud oo PLC ah, xasillooni xoog leh, cunsur nabadgelyo sare, gebi ahaanba kala-tag.
Series Mashiinka mashiinka kala jajabaya ee baaldiyeyaasha taxanaha ah ee 'CBJ' wuxuu leeyahay dhawaq yar, gariir la'aan.
Degree Heer sare oo otomaatig ah, wax soo saar sareeya
● Inta lagu guda jiro hawlgalka mashiinka mashiinka jajabka ah ee 'CBJ Series', ha hagaajin, ha taaban qaybaha dhaqaaqa, ha ku cadaadin waxyaabaha ku jira sanduuqa maaddada gacmahaaga ama cagahaaga
Taxane CBJ mashiinka jajabka bale jabiyaha ee saliida siiya saliida wareegga saliida isku dhafan iyada oo loo marayo mashiinka tuubbada korontada ku shaqeeya, ka dibna wuxuu u gudbiyaa silsiladda hawo-mareenka iyada oo loo marayo qalabka gacanta lagu qaybiyo si loo soo saaro awood. Cadaadiska waxaa lagu hagaajin karaa qiimeynta loo baahan yahay iyadoo loo eegayo xaalada dhabta ah (qiimeynta waxaa lagu muujiyaa qiyaasta cadaadiska) .Baarleetarka baalallaha waxaa lagu kala soocayaa qabashada iyo tuujinta qalabka korontada ku shaqeeya, iyo kala bixida baalasha iyadoo loo marayo kala-jajab badan.
Taxanaha CBJ mashiinka xoqida ee baaladaha jajabka ah wuxuu ka kooban yahay mashiinka ugu weyn, nidaamka haydarka, khalkhal galiyaha, dogobka balanbaalista, taangiga saliida, bamka saliida iyo mootada.
Mashiinka madaxa cidiyaha oo la beddeli karo
Baddalka birta birta ah ee xoogga badan ee la beddeli karo ayaa loo isticmaalaa madaxa musqusha, hagaajinta caabbinta duugga ah iyo nolosha adeegga ee ciddiyaha jillaab.
1.Sahlaynta si fudud
Taxane CBJ mashiinka xoqida ee bale jebiyaha mashiinka ayaa qaatay koronto cilmiyaysan iyo qaabdhismeedka xoqan, cidiyaha qabatooyinku si fiican ayey u baakadeeyeen baakada, taas oo ka dhigaysa mid fudud in la furo.
3. Xidho naqshad adkaysi u leh qaybaha muhiimka ah ee tareenka haga
Marka loo eego astaamaha xirashada tareenka hagaha iyo qaybaha kale ee ku habboon ee jirku ka kooban yahay, xoogga sare ee saxanka birta daawaha ah ee xira u adkaysta ayaa lagu rakibay qolka.
Model Cadaadiska Magaca (Ton) Cabirka bale laga saari karo（mm） Awood (KW)
Mashiinkayaga taxanaha ah ee mashiinka bajaajka ee 'CBJ Series' wuxuu bixiyaa qaybo mashiin caan ah oo caan ah, waxaan la shaqeynay shirkado badan oo caan ku ah aduunka, sida SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI iyo wixii la mid ah in ka badan 10 sano
Moodalka ugu yar Mashiinkeenna CBJ Taxanaha mashiinka baal-jajabka ee baalladda si wanaagsan ayaa looga ilaalin karaa hal weel 40 HQ. Haddii doon lagu raro, waxaan dabooli doonnaa poncho iyo Load skax si aan u ilaalino mashiinkeenna CBJ Series mashiinka xoqidda
Halkan ka daawo taxanaha CBJ Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah!
Hore: Qaab No: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah WS Taxanaha Kaydinta Qalabka Mashiinka Qalabka Xirmooyinka
Xiga: Qaab No: Soo-saarista Shiinaha Is-xakameynta otomaatiga ah ee SPJ Mashiinka mashiinka birta
mashiinka haraaga ah ee baaldi jajab
Mashiinka Birta Briquette, Sheet Birta Baler, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger, Baler Xadhig Baler, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah,